Andro: 20 Oktobra 2019
Fangatahan'ny IMM amin'ny Tetezamita Haydarpasa Alatsinainy!
Ny Hezarfen isan-taona 15, tompon'ny tompon'andraikitra teo aloha ao amin'ny Fikambanan'i Okcular, izay nahazo ny volavolan-dalàna izay nosokafan'i TCDD ho an'ny fanofaan'ny trano fanao isan-taona 2 ary ny lalamby lalamby any Sirkeci, ary ny IBB dia nesorina tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny kianjan'ny rivotra sy ny rano. [More ...]
Metro Istanbul, 2 dia nanao fanambaràna momba ilay tsy fahombiazana
Ny renivohitr'i Metropolitan Istanbul Metro Istanbul, Seranam-piaramanidina Yenikapi-Ataturk sy metro metro Yenikapi-Kirazli dia nanambara ny tsy fahombiazan'ny. Tao amin'ilay fanambarana, "Ny sidina dia misy eo anelanelan'ny seranan'i Sağmalcılar-Airport sy Otogar-Kirazlı." In Istanbul, [More ...]
Metro Istanbul Namoaka ny rakitsoratra mpandeha tamin'ny zoma
Ny kaonty media sosialin'ny Metro Istanbul dia nanambara fa tapaka tamin'ny zoma teo ny firaketana fampiasa. "Raketo ny laharana M2, M5 ary ny isan'ireo fitsangatsanganana! 18 Oktobra 2019 Tamin'ny zoma M2 Yenikapi-Haciosman metro [More ...]
Fa maninona no mihetsika ny lamasinina?
I Mısra Öz Sel, izay namoy ny zanany Oğuz Arda Sel sy ny vadiny taloha, Hakan Sel nandritra ny loza tamin'ny fiaran-dalamby tao Çorlu, dia nizara kaonty media sosialy mahavariana. Ny foibem-piantsoana intercité omaly tao amin'ny garajan'i Kazlıçeşme any Marmaray any Istanbul [More ...]
Eskişehir fiaran-dalamby hiasa indray araka ny tany am-boalohany
Ny asa famerenana amin'ny laoniny sy ny fanamafisana ny garan-dalamby amin'ny Eskişehir, izay nanomboka tamin'ny taon-dasa dia hiasa indray araka ny tany am-boalohany. Kasaina hovitaina ao anatin'ny taona 2020 ny asa. Mifanaraka amin'ny fahitana vaovao amin'ny lalamby an'ny firenentsika, fiaran-dalamby haingam-pandeha ary [More ...]
Fahombiazana amin'ny famokarana moto sy tractor 'TÜMOSAN'
Necmettin Erbakan 1975 taona, rehefa manaisotra ny didim-panjakana-panjakana Minisitra sy ny Praiminisitra lefitra Mechanical sy Chemical Industry Corporation (MKEK), Torkia fambolena Fitaovana Corporation (TZDK), Şekerbank Torkia Maritime Bank sy ny Fanjakana [More ...]
Ny fanokafana tetikasa andiany maro izay vita tany Kayseri dia notarihin'ny Filoha Recep Tayyip Erdoğan. Minisitry ny tontolo iainana sy ny tanàna Murat Kurum, minisitry ny Fanabeazam-pirenena Ziya Selçuk, minisitry ny Fiarovam-pirenena Hulusi [More ...]
Fandrefesana fitaratra amin'ny fantsilana any Karaman
Ny Kaominin'i Karaman dia nametraka fitaratra teo amin'ny andaniny roa amin'ny lalana mankany amin'ny sampanan-dalana sy ny lalana izay ety ny fahitana. Tale Kaominaly Karaman tao amin'ny serivisy momba ny fitaterana [More ...]
Seminera fanaraha-maso ho an'ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka any Antalya
Ny seminera mifehy ny hatezerana dia nomena ireo mpamily izay miasa amin'ny fitateram-bahoaka eto an-tanàna amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Antalya Metropolitan Municipality Transportation Inc. ary Antalya Chamber of Tradesmen and Craftsmen. Fitondran-tena sy hafahafa [More ...]
Fitaterana maimaimpoana mankany Mukhtars ao Izmir
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Tunç Soyer, ny 1 Novambra Novambra dia ho maimaim-poana ho an'ny mukhtars nambara. Munzmir Metropolitan Municipal dia nikarakara ny Andron'i Mukhtar hatramin'ny 2015, ary raikitra ao İzmir. [More ...]
Fitateram-bahoaka any amin'ny Repoblika Andron'ny Repoblika any İzmir 1 Kuruş
Izmir Metropolitan kaominina, 29 Oktobra Republic Day ny saram-pitaterana fitateram-bahoaka ho an'ny 1 penny dia nanapa-kevitra ny. Torkia, 29 Oktobra 2019 Talata, xnumx'nc no hankalaza ny tsingerintaona ny nanorenana de la République. National fialan-tsasatra any Izmir [More ...]
Vita ny hopitaly Akçaray mandra-panokafana ..!
Ny ben'ny tanànan'i Kocaeli Tahir Büyükakın dia nanome ny vaovao tsara. Ny departemantan'ny hopitaly ao Akçaray no ho vita mandra-pahatongan'ny fanokafana ny hopitaly ao amin'ny tanàna. Efa any Kuruçeşme [More ...]
Androany amin'ny tantara: 20 Oktobra 1885 ao amin'ny Gazety Ankara Vilayet
Androany ao amin'ny tantara 20 Oktobra 1885 Araka ny vaovao tao amin'ny Gazety Ankara Vilayet dia nangataka gara ny mponina tao Ankara niaraka tamin'ny fangatahan'izy ireo tany amin'ny Minisitry ny raharaha anatiny sy ny Sultan. 20 Oktobra 1921 Nanaraka ny fifanarahana Ankara tamin'ny Frantsay, Ulukışla-Mersin [More ...]
Dacia dia manolotra tombontsoa mahaliana amin'ny volana Desambra miaraka amin'ny tombony amin'ny Zero mahaliana
Ford Trucks 2 dia nanambara ny varotra 1000 fiarakodia tao Romania